वर्षा र बाढीपछि ह्वात्तै बढ्यो तरकारी र फलफूलको मूल्य, कुन तरकारीको मूल्य कति ? « Khabar24Nepal
वर्षा र बाढीपछि ह्वात्तै बढ्यो तरकारी र फलफूलको मूल्य, कुन तरकारीको मूल्य कति ?
असार ३०, काठमाडौं । केही दिनदेखिको अविरल वर्षाका कारण काठमाडौंमा तरकारीको भाउ बढेको छ । बाढी पहिरोका कारण सडक यातायातमा असर पुगेपछि ढुवानीमा समस्या तथा भारी वर्षाले तरकारी खेतीमा पु¥र्याएको असरका कारण तरकारीको भाउ बढेको हो ।
कोभिडको खोप अर्काे वर्षको मध्यपछि मात्र बजारमा आउँछ– विश्व स्वास्थ्य संगठन
चित्रबहादुर केसीको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर, सहयोग गरिदिन जनमोर्चाको अनुरोध
कोरोनाको औषधि नेपालमै बनेको दाबी